1. Spotify Account
1 Wadamada Spotify
2 Username Password &
3 Login Arrimaha
4 Aayad In Spotify
6 Premium Code
7 aan Spotify xayeysiis
8 Spotify Gift Card
9 Spotify Times
10 Spotify Update
11 Spotify Hagaaji
15 Delete Spotify Account
16 Cancel Spotify Account
2. dhimista & Free
1 Spotify Kharashka
2 Spotify 30 Maalmood Trial
3 Spotify Premium Free
4 Spotify 3 bilood Free
5 Tria Premium Free
6 Spotify dhimista
7 Spotify Qoyska
9 Spotify ee Ardayda
10 iibiyay Spotify
3. playlists Spotify
1 Samee playlist
2 Dhoofiya Spotify playlist
3 iskaashi playlist
4 ugu fiican playlists Spotify
5 download Spotify playlist
6 songs sare Spotify
7 share playlists
8 badbaadin Music playlist
9 sano Spotify ee Music
4. Spotify Tools
1 Best Spotify Downloader
2 Download Music ka Spotify
5 rikoorrada Spotify
6 Play on Spotify
8 Alternative for Spotify
5. Spotify qalabka
2 Spotify for Windows
3 PC Spotify
4 Spotify u Mac
6 qaadan karo Spotify
7 Spotify on Windows Phone
10 Spotify u iPhone
12 Spotify Client
6. Wixii Talo Spotify
1 Spotify Taariikhda
2 Spotify Tayada Sare
3 Spotify badalka
4 Open Spotify
5 Ku rakib Spotify
6 Raac Spotify
7 Saaxiibadu Spotify
9 Spotify xadaysan
11 Control Spotify Remote
12 Search Spotify
13 Upload Music
14 Arrimaha Spotify
7. Kuwo kale
1 Apple Music Vs Spotify
2 Apple Spotify Google
4 Heshiisyada Spotify
6 Sidee Spotify Works
Spotify waa adeeg geeyo music caan ah oo si joogto ah loo isticmaalo. Tiro badan oo ah dadka isticmaala maalinle ah ayaa la diiwaan xisaabaadkooda . Spotify ayaa hadda ku kooban adeegyada ay qaar ka mid ah gobollada juqraafi. Laakiin dadka raba inay helaan helitaanka shabakadda Spotify iyo isticmaali madal Streaming ah. Xadido meelaha ay hawlgalka ayaa dadku u isticmaalaan habab toobiye si aad u hesho si aad u isticmaasho adeegan. Tani waxaa ka mid ah jabsiga, xisaab-abuur ah, iyo wakiil oo VPN. Dhammaan adeegyada kuwaas oo bartey codsiga sameeyey ayaa la heli karaa si ay dunida ka ay. Halkan qoraalka soo socda waxaan ku jeeday isticmaalka of 'badalka' si ay u isticmaalaan codsiga Spotify .
Badalka waa software-dhexaadin u dhexeeya macmiilka iyo ilaha khayraadka (server). Server wakiil ayaa isku xira macaamiisha si ay isha. Haddaba markii codsiyada macmiilka u ah qaar ka mid ah ilaha ugu, server wakiil ka qabtaa rukhsadda loo baahan yahay iyo faahfaahinta dari macmiilka siiyaan files codsaday. Mararka qaarkood servers wakiil loo isticmaali karaa inay xaddido helitaanka server u magacaaga iyo isgarad-of user asalka, halka xisaabta ku meel gaar ah qaar ka mid ah waxaa loo isticmaalaa in lagu galo shabakadda sidaas ilaalinta aqoonsigaaga iyo dayactirka gaarka ah.
Qaybta 1. Waa maxay wakiil Spotify?
Qaybta 2.Why aad u baahan tahay wakiil?
Qaybta 3.How si aad u hesho adeegyada wakiil Spotify?
Download music Spotify free la TunesGo aan wakiil Spotify
1.What yahay wakiil Spotify?
Haddii wakiil server Spotify ah, ee user (macmiilka) codsado qaar ka mid ah kuwan raadkaygay dhex server wakiil oo elsewise lama heli karo ka. Server wakiil ayaa ku darayaa ama overlaps faahfaahinta user asalka ah sida in server isha ogolaan karo in ay helaan macmiilka iyo sidaas ilaha laga heli karaa codsi.
2.Why samayn aad u baahan tahay wakiil?
Dadka isticmaala oo ay ka shaqeeyaan iyo isticmaalka codsiga ee gobolka qaar ka mid ah halkaas oo adeegyada ama raad gaar ah oo aan la heli karo, laakiin aad rabtid in aad helaan files kuwa, waxa laga qaban karo. Maxaa dhacaya haddii aad hirgaliyo karo ama qarin goobtaada dhabta ah iyo iyada oo qaar ka mid ah codsiga dhexaadin lagugu hagi kara ama hesho si ay u isticmaalaan adeegyadan, ka dibna waxaad u baahan tahay adeeg wakiil ah inay sidaa sameeyaan. Server wakiil ayaa nuqul lahaa meesha ama cinwaanka IP goob ka duwan, hadda oggolaan in adeegyada la heli karo si loogu isticmaalo gobolka in sidoo kale. Sidoo kale haddii aad tahay
3.How si aad u hesho adeegyada wakiil Spotify?
Adeegyada badalka Spotify laga heli karaa iyadoo la isticmaalayo shabakadaha kala duwan oo wakiil laga heli karaa versions bixiyo oo lacag la'aan ah. Waxaa jira 2 nooc oo ah ikhtiyaarada: Adeegyada VPN server iyo wakiil.
Shabakadaha VPN qarin goobtaada dhabta ah iyo in la abuuro aqoonsi dalwaddii in goobta qaar ka mid ah si aad u isticmaali kartaa adeegyada Spotify ah. Ayaa goobta cusub VPN siin lahaa cinwaanka cusub IP in server isha ka dibna la isugeeyey kuwa file si aad nidaamka qaar ka mid ah adeegyada la heli karo waa
Waxaad isticmaali kartaa habka soo socda si aad u dalbato wakiil:
1. Fur soo socda goobta file D: \_ Taariikh \_\_ AppData \_ barqiyey \_ Spotify
2. Edit faylasha pref
3. Ku dar ama wax ka beddelo xeerka soo socda ee faylka
network.proxy.pass = "Furaha badalka HALKAN"
autologin.username = "Magaca adeegsadaha Spotify"
network.proxy.addr = "badalka cinwaanka @ http"
network.proxy.mode = 2
network.proxy.user = "AAD badalka isticmaalaha"
core.clock_delta = 0
4. Hadda abuurtaan codsiga Spotify ah, wakiil ka ah waa in hadda noqon functional
Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah adeegyada la heli karo wakiil laga heli karaa bogga internetka waa codsi Tunnelbear ah. Waxaa ka mid codsiga la doorbidayo ee Mareykanka iyo meelaha Yurub. Waxa uu sameeyey adeegyada Spotify fudud loo heli karo in dadka isticmaala iyo sidoo kale qaar ka mid ah muuqaalada gobolka gaar ah oo loo isticmaali karo oo dhan goobaha.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa goob wakiil aad ku qalab aad iyo iyaga sida beddelo si ay u isticmaalaan codsiga Spotify iyo qaababka ay.
[Mac] / Users // Library / Codsiga Support / Spotify / prefs
[Win] C: \_ Users \_\_ AppData \_ barqiyey \_ prefs Spotify \_
[Linux] ~ / .config / Spotify / prefs - (lildude mahad)
Goobood oo waxay kaa caawin karaan in aad xaalkaa goobaha aad.
Wondershare TunesGo - Download Transfer u maamuli lahayd music aad macruufka / Android Devices
YouTube sida aad Source Music Personal
Aad Music Bedelka ka Device macruufka
Isticmaal Lugood leh Android
Buuxi oo idil Music Library
U dayactir Tags id3, daboolayaa, kaabta
Maamul Music iyada oo aan xayiraado Lugood
Share Your Lugood playlist
Sida loo Dhegayso Spotify Unlimited via Spotify Qoyska
Ma doonaysaa inaad kala soo baxdo Spotify playlist lacag la'aan ah? Inta imaaw
Isbarbardhigga sare 7 Goobaha Music la Spotify
Ma taqaanaa Kuwani Control Spotify Remote?
Sida loo Dhegayso Spotify Music on PC Spotify
Sidee badan aad ka ogaato ku saabsan Spotify-dhimista?
Ma taqaanaa Kuwani Top 10 rikoorrada Spotify?
Aqoonta API Spotify u Developer Spotify
Talooyin ku saabsan Spotify Update
> Resource > Spotify > Spotify badalka